प’क्राउ परेकी ज्वाला संग्रौलालाई के गर्दैछ प्रह’री ? थप १ जना पनि प’क्राउ – Taja Khawar
प’क्राउ परेकी ज्वाला संग्रौलालाई के गर्दैछ प्रह’री ? थप १ जना पनि प’क्राउ
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २१, २०७८ समय: १९:००:४७
काठमाडौं / विभिन्न आ’रोपमा प’क्राउ परेकी ज्वाला संग्रौला घट’नाको अनु’सन्धान अझै सकिएको छैन । उनी विरु’द्ध प्रहरीले ३ अभि’योग लगाएको छ ।
पछिल्लो पटक नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनकी नेता खुस्बु घिमिरेसंगको वि’वाद पछि ज्वाला सहित उनका पति हिमाल उपाध्याय र शर्मिला वाइवा पनि प’क्राउ परेका थिए ।
खुश्वुले ज्वालाको समुहले आफुलाई हा’तपात गरेको अभियोग लगाएकी थिइन् । त्यसवाहेक खुश्वुको समुहले एक ट्राफिक प्र’हरी अधिकारीलाई रं’गभेदी अभिब्यक्ति दिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
ति प्र’हरीले पनि ज्वाला र उनको समुह वि’रुद्ध उ’जुरी दिएका थिए । त्यस पछि अनुस’न्धानका क्रममा ज्वालाले सरकारी कागज कि’र्ते गरेको समेत फेला परेको छ । यि तीन घ’टनामा उनी र उनको समुह माथि अहिले अनु’सन्धान भइरहेको छ ।
सुरुमा उनीविरुद्ध अ’भद्र व्यवहारमा प्रह’रीले मु’द्दा दर्ता गरे पनि उनले विवाह र जन्मदर्ताको कागजमा कि’र्ते गरेको पाइए पछि घ’टना थप पे’चिलो बनेको छ । उनीसहित प’क्राउ परेका तीनै जनावि’रुद्ध चौथोपटक अदा’लतवाट म्याद लिएर प्र’हरीले अनु’सन्धान गरिरहेको छ ।
ज्वाला र उनको समुह वि’रुद्ध महाराजगन्जमा कार्यरत प्र’हरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झाले पनि उ’जुरी दिएका हुन् । सोही घट’नामा सम्पर्क वि’हिन रहेका भनिएका दोलखाका यमबहादुर खड्कालाई समेत प्र’हरीले प’क्राउ गरेको छ । उनलाई आइतबार काठमाडौंबाट प्रह’रीले प’क्राउ गरेको हो ।
ज्वाला जापान जानुअघि खुश्बुकै घरमा डेरामा बसेकी थिइन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उनीहरु एकार्का वि’रुद्ध आ’गो ओ’कलीरहेका थिए । – ई’ताजा ख’बरबाट ।
Last Updated on: July 5th, 2021 at 7:00 pm